DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw gaaray magaalada Jowhar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhaw gaaray magaalada Jowhar
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhaw gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, halkaas oo maanta lagu caleemo saarayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele iyo kuxigeenkiisa.
Wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si aan caadi ahayn looga soo dhaweeyay garoonka magaalada Jowhar, waxaana safarka Xasan Sheekh uu yahay mid uu ku doonayo inuu goob-joog ka ahaado caleemo saarka madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo ku-xigeenka, taas oo lagu wado in saacadaha soo socdo ay si toos ah uga bilaabato halkaas.
Maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu magaalada B/weyne kulan kula yeeshay odayaal dhaqameed oo uu hormuud u yahay Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo horey si weyn uga soo horjeeday dhismaha maamulkaasi.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa saakay dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, iyadoona ammaanka goobta ay maanta caleemo saarka ka dhici doonto halkaasi si weyn loo adkeeyay.
Xafladda caleemo saarka ayaa sidoo kale la filayaa inay kasoo qeyb galaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadda kale ee dalka, iyadoona saacadaha soo socdo ay xafladda si toos ah u bilaaban doonto.